सापकोटाको चंगुलमा गृहमन्त्री थापा, कहाँबाट सञ्चालित छन् सचिव ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सापकोटाको चंगुलमा गृहमन्त्री थापा, कहाँबाट सञ्चालित छन् सचिव ?
प्रकाशित मिति २८ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०९:३० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । गृहमन्त्री सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ठूलो असहयोग गर्दा नेपाल प्रहरीभित्र बढुवा रोकिएको खुलासा भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विभिन्न लोभलालचमा पारेर गृह मन्त्रालयको सचिव पड्काएका सापकोटाले प्रहरीभित्रको बढुवा अड्काएर राखेको आरोप छ । सापकोटालाई आरजु राणाको दवावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गृह सचिव बनाएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगले लेखेर पठाइ सकेको छ । तर, सचिव सापकोटाले विभिन्न बहाना बनाएर रोकेर राखेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आएका छन् । तर, उनलाई पनि गृहसचिव सापकोटाले गुमराहमा राखेको आरोप छ । गृहमन्त्री थापाले ऐन नियमअनुसार काम गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि उनलाई गृहसचिव सापकोटाले घुमाउन थालेको स्रोतले जनाएको छ ।
एसएसपी र डिआईजीहरूको बढुवाका लागि नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्याल पनि पोजेटिभ छन् । तर, गृहसचिव सापकोटाले प्रहरीको बढुवा रोकेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘गृहसचिवज्यूले खै के खोज्नु भएको छ ? थाहा भएन । उहाँले आर्थिक विषयमा कमजोर हुनुहुन्छ’, बढुवा हुन नसकेर केही समय अगाडि रिटार्यड भएका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गृह सचिव सापकोटा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजुका कारण नेपाल प्रहरीको बढुवा हुन नसकेको हो ।’
गृह सचिव सापकोटा र आरजु राणाबीच अहिले पनि उस्तै राम्रो सम्बन्ध रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको समयमा बढुवा हुन नसक्दा तल्लो तहका १२ हजार प्रहरी मर्कामा परेका छन् । प्रहरीमा विगत डेढ वर्षदेखि बढुवा रोकिएको छ ।
गृहसचिव सापकोटाका कारण एसएसपी मिलन बस्नेत, यादवराज खनाल रिटार्यड हुनु परेको छ । डिआईजीको पद रिक्त हुँदा हुँदै पनि बस्नेत र गौतम घर जान बाध्य भएका हुन् । अर्का एसएसपी कृष्णप्रसाद गौतम पनि बढुवा हुन नसक्दा केही दिन अगाडि एसएसपीबाटै घर जान बाध्य भएका छन् । जब कि १२ जना डिआईजीका लागि पद रिक्त छ ।
चैतको दश गतेसम्म बढुवा नहुने हो भने एसएसपी सुवास चौधरी र विष्णुहुरि गौतम पनि घर जान बाध्य हुनेछन् ।
आईजीपी अर्यालले पनि अनिर्वाय अवकास पाउँदै छन् । उनको ठाउँमा कसलाई आईजीपी बनाउने भन्नेबारेमा भित्रभित्रै चर्चा सुरु भए पनि गृहमन्त्रालले त्यसको तयारी थालेको छैन ।
नेपाल प्रहरीको आईजीपी बन्ने लाइनमा डिआईजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की अग्रभागमा देखिएका छन् ।
विषादी प्रयोगशालाका लागि डेढ करोड
काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेशमा विषादी प्रयोगशाला केन्द्र स्थापनाका लागि रू डेढ करोड छुट्याइएको छ ।
कर्णालीलाई जैविक प्रदेशका रुपमा विकास…
‘मानसिक अवस्था बिग्रेका कर्मचारीलाई मात्रै स्वैच्छिक अवकाशमा पठाईनेछ’
काठमाडाैं । भी–पिआरधारी कर्मचारीलाई जागिर छोडाएर अघिल्लोपटक चर्चामा रहेका लालबाबु सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएका छन्
अब लालबाबुको प्रथम परीक्षा– नौ…
बैतडी डोजर काण्ड : थप तीन विरुद्ध मुद्दा दर्ता
बैतडी । सडक निर्माणका क्रममा डोजरले महिला हुत्याएको बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–९ को ग्वाल्लेकको घटनामा थप तीन जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने…
३३ केजी सुन काण्डमा संलग्न रहेका पूर्व डिआईजी निरौला पक्राउ
काठमाडौ । दुवइबाट अबैध रुपमा ३३ किलो सुन भित्रिएको र उक्त सुनको भरियाको रुपमा रहेका सवनम शाक्यको हत्यापछि प्रहरीले…
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मत कहाँ र कसरी हाल्ने, मतदान प्रक्रियाका बारेमा सबै अनविज्ञ !
काठमाडौं । सरकारले माघ २४ गतेका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तय…
‘मिस नेवा’ प्रतिस्पर्धीले नेवारी कला देखाए
काठमाडौं। ‘मिस नेवाः ११३८’का प्रतिस्पर्धीले आ–आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छन् । नेप्लीज फेसन होमद्वरा आयोजित प्रतियोगितका प्रतियोगीले शनिवार काठमाडौंमा सम्पन्न…
चीनमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार पुग्यो
आज ७० औँ प्रजातन्त्र दिवस टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम गरिदैँ
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 16 views
शिवरात्रिमा नागाबाबा : महिलालाई पशुपतिनाथ गइनसक्नु ! 14 views
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 13 views
ससुरा बा ! (कथा) 13 views
“मलाई नेतृत्वमा आउन देशभरकै व्यावसायीहरुकै तिव्र दवाव छ “ 10 views
सेक्स गर्ने चाहना हुँदा युवतीले कस्तो संकेत देखाउछन् ? जान्नुहोस।9views
बुबाको कान्छी श्रीमतीलाई बुबाको शेषपछि छोराले श्रीमती राख्ने परम्परा7views
युवतीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ? लिनुहोस् टीप्स!7views
एमसीसीबारे नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन तयार6views